नियमित पारासिटामोल सेवनले यस्ताे घा`तक राेग निम्ताउन सक्ने चे`तावनी, जान्नुहाेस् ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / नियमित पारासिटामोल सेवनले यस्ताे घा`तक राेग निम्ताउन सक्ने चे`तावनी, जान्नुहाेस् !
नियमित पारासिटामोल सेवनले यस्ताे घा`तक राेग निम्ताउन सक्ने चे`तावनी, जान्नुहाेस् !
admin February 10, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 122 Views
दैनिक ओखर खाँदा पुरुषका यस्तै थुप्रै समस्या हट्ने, खाने सही तरिका के त ? हेर्नुस
के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत !
उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले लामो समयसम्म नियमित पारासिटामोल औषधि खाँदा त्यसले ह्रदयघा- त र मस्तिष्कघा-तको जोखिम बढ्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । एडिनबरा विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले बिरामीलाई दीर्घकालीन रूपमा पारासिटामोल खान सिफारिस गर्नुअघि डाक्टरहरूले यसको जोखिम र फाइदालाई विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले टाउको दु-ख्दा र ज्वरोका लागि पारासिटामोल खाँदा भने सुरक्षित हुनेमा जोड दिएका छन् । अन्य विज्ञहरूले यो अध्ययनको नतिजालाई बलियोसँग पुष्टि गर्न यस विषयमा थप धेरै मानिसमा लामो अवधिको अध्ययन आवश्यक भएको बताएका छन् । सामान्य दुखाइ कम गर्ने औषधिका रूपमा पारासिटामोल विश्वभर व्यापक प्रयोग गरिन्छ । यसको फाइदा प्रमाणित नभए पनि दिर्घकालीन दु-खाइको समस्या कम गर्नका लागि पनि सिफारिस गर्ने गरिएको छ।
सन् २०१८ मा स्कटल्यान्डमा पाँच लाख जनालाई पारासिटामोल सिफारिस गरिएको थियो । यूकेमा मात्रै ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई उच्च रक्तचापको समस्या छ । एडिनबरा विश्वविद्यालयको अध्ययनले ११० जना स्वयंसेवीहरूलाई समेटेको थियो जसमध्ये दुई तिहाइ उच्च रक्तचापको समस्या भएका व्यक्ति थिए ।
अध्ययनको परीक्षणमा उनीहरूलाई दुई साता दैनिक चार पटक एक ग्राम पारासिटामोल सेवन गर्न लगाइएको थियो र अर्को दुई साता उनीहरूलाई सेवन नगर्न भनिएको थियो । परीक्षणले पारासिटामोलले रक्तचाप बढाएको देखियो जुन ह्रदयघा-त र मस्तिष्कघा-तको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो । अध्ययनकर्ताहरूले चिकित्सकहरूलाई विरामीको लागि नियमित पारासिटामोल सेवन गर्न दिँदा सकेसम्म थोरै मात्रा दिन र रक्तचाप एवम् मुटुसम्बन्धी रोगबारे चनाखो रहन सुझाव दिएका छन् ।
`ज्वरो र दुखाइ कम गर्न छोटो अवधिको लागि पारासिटामोल सेवन गर्ने विषयमाथिको यो अध्ययन होइन, त्यसो गर्नु हुन्छ,´ प्रमुख अध्ययनकर्ता डा। इयन म्याकइन्टायरले भने । लन्डन विश्वविद्यालयका डा। दीपेन्दर गिलले सर्कुलेशन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले `श्वेत स्कटिश जनसङ्ख्यामा रक्तचाप थोरै तर महत्त्वपूर्ण वृद्धि भएको´ देखाएको तर `धेरै कुरा थाहा नभएको´ बताए ।
`पहिलो कुरा त जुन रक्तचाप वृद्धि भयो त्यो लामो समय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने स्पष्ट छैन,´ उनले भने । `दोस्रो कुरो पारासिटामोलका कारण वृद्धि भएको रक्तचापले मुटुसम्बन्धी समस्या बढाउन कारक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निश्चित छैन ।´ अमेरिकामा गरिएको एउटा ठूलो अध्ययनले पारासिटामोलको दीर्घकालीन प्रयोग र ह्रदयघा- तको जोखिमबीच सम्बन्ध रहेको पाए पनि त्यसकै कारण ह्रदयघा-त हुने कुरा प्रमाणित गर्न सकेको थिएन ।
अन्य साना अध्ययनहरूले पनि यो सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । एडिनबरा विश्वविद्यालयको टोलीले पारासिटामोलको प्रयोगले रक्तचाप कसरी बढ्छ भनेर पत्ता लगाउन नसकिएको तर अध्ययनले नियमित पारासिटामोल सेवनका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको बताएको छ । पारासिटामोललाई अन्य प्रकारका दुखाइ कम गर्ने औषधिभन्दा सुरक्षित ठानिन्छ ।
अध्ययनलाई सहायता गरेको ब्रिटिश हार्ट फाउन्डेसनले पारासिटामोल जस्ता सुरक्षित ठानिएका औषधिहरूको आवश्यकताबारे बिरामी र चिकित्सकहरूले बरोबर पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ । स्ट्रोक एसोसियसनका डा। रिचर्ड फ्रान्सिसले `पारासिटामोलको जोखिम र फाइदा हेर्नका लागि लामो अवधिको स्वस्थ्य जनसङ्ख्यामा अध्ययन´ आवश्यक रहेको बताएका छन् । साभार बिबिसी नेपाली
Previous दीपिकाको बोल्ड शीन रहेको ‘गहराइयाँ’ फिल्मको रोमान्टिक गीत सार्वजनिक, पति रणवीरले दिए यस्तो प्रतिकृया (भिडियो हेर्नु)
Next माघ २८ गते शुक्रवारको तपाईको भाग्यफल यस्तो छ
पि`साब धेरै समय रोक्ने बानिले हुन्छन् यस्ता घा`तक राेग, थाहा पाए कसैले रोक्दैन पि`साब !
पि`साब धेरै समय रोक्ने बानिले हुन्छन् यस्ता घा`तक राेग, थाहा पाए कसैले रोक्दैन पि`साब ! …